अमेरिकामा उडान गर्दा विमान र अवतरण गर्दा हेलिकप्टर - Naya Pusta
अमेरिकामा उडान गर्दा विमान र अवतरण गर्दा हेलिकप्टर
Naya Pusta २०७५ असार २३ गते प्रकाशित
काठमाडौँ । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित एक कम्पनीले एउटा ‘ट्रान्सफर्मर’ विमान बनाएको छ । जुन ठूलो विमान झै उड्छ, हेलिकप्टर झै ल्याण्ड(अवतरण) गर्न सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : फेसबुकको रङ निलो किन ? जान्नुहोस रोचक तथ्यहरु !
चन्द्रमामा पुगेका भनिएका नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा नगएको खुलासा